Nandresy Taorian’ny Fahafatesany ireo Mpanao Gazetin’ny Népszabadság, Gazety Hongroà Iray Nakatona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Febroary 2017 4:21 GMT
Ny ekipan'ny Népszabadság. Nahazoana alàlana avy amin'ny pejy Facebook-n'ny ekipa mpamoaka lahatsoratra “Népszabi” .
Nihoby ny fanapahan-kevitry ny fitsarana ho “mari-pandresena aoriam-pahafatesan'ireo mpanao gazetin'ny Népszabadság” ny Reporters Sans Frontières (RSF). Araka an'i Pauline Adès-Mével, filohan'ny biraon'ny Vondrona Eoropeana ao Balkans RSF :
Mpanao gazety ao amin'ny sampana raharaham-bahinin'ny Népszabadság nandritra ny 11 taona i Anita Kőműves, ary mpanangom-baovao momba ny politika Amerikana izy nanditra ny dimy taona mndra-pahatonga ny fikatonan'ny gazety. Anisan'ny ekipam-panadihadiana tao amin'ny gazety ihany koa izy: manambara ny tena fandaniam-potoanan'i Hongria amin'ny lobbying any Washington ny iray amin'ireo tantarany .
Nilaza tamin'ny Global Voices izy fa mampiseho firaisankina amin'ny mpiasan'ny Népszabadság ireo mpanao gazety avy amin'ny sehatra fampitam-baovao hafa – elatra ankavia sy ankavanana (afa-tsy ny farany havanana). Nilaza i Kőműves fa avy amin'ny fanovan'ny governemanta tanteraka ny tontolon'ny fampitam-baovao tao Hongria hatramin'ny nanombohan'ny governemanta niasa tamin'ny taona 2010 no nitsanganan'izao firaisankina goavana izao. Nanova ny lalànan'ny fampitam-baovao Hongroà ny governemanta, anisan'izany ny fandroahana mpiasa miisa 1.000 mahery tao amin'ny orinasan'ny haino aman-jerim-panjakana, sy ny fandroahana ny toniandahatsoratry ny tranonkalam-baovao malaza Origo.hu taorian'ny namoahana tantara iray momba ny fandanian'ny sekreteram-panjakana nandritra ny nataony.
Gazety Hongroà lehibe iray miandany amin'ny ankavia , izay midika hoe Fahafaham-Bahoaka, ny Népszabadság ary naorina nandritra ny Revolisiona Hongroà tamin'ny taona 1956. Lasa gazety tsy miankina izy nandritra ny taompolo 1990, ary niova imbetsaka ny tompony, mandra-pahatonga ny nitantanan'ny Mediaworks azy tamin'ny taona 2015.
Niteraka fihetsiketsehana goavana tao Budapest ny fanakatonana ny gazety. Roa herinandro sy tapany tatỳ aoriana, nivarotra ny Népszabadság tamin'ny Opimus Press , vondrona fampitam-baovao iray an'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny praiminisitra ao Hongria, Viktor Orbán, ny tompon'ny Mediaworks.
Nitatitra ny Reuters fa anisan'ny paikady iray napetraky ny mpiara-dia amin'i Orbán mba hanjakazakana amin'ny tontolon'ny fampitam-baovao ao amin'ny firenena amin'ny alalan'ny fiarovana “tambajotra fampitam-baovao am-pirahalahiana” ity fividianana ny gazety ity. Tsy mbola nitantana sehatra fampitam-baovao mihitsy ilay tompony vaovao .
Novelomina indray ny tahiry nomerikan'ny gazety volana maromaro taorian'ny fipoahan'ny vaovao. Ankehitriny, azon'ny rehetra jerena ireo lahatsoratra farany, ahitana ny lahatsoratra tamin'ny taona 2008 izay nosoratan'ny mpanoratra ity lahatsoratra ity mikasika ny Fihaonana An-tampon'ny Global Voices tany Budapest .